विचार / विश्लेषण Archives - Page2of 20 - TV Annapurna
Category: विचार / विश्लेषण	घरबेटीको बेतिथीः छतबाट मान्छे खसाल्नेदेखि राती भाडाकुँडा बाहिर फाल्नेसम्म
February 8, 2017 tvannapurna03	टिभी अन्नपूर्ण २६ माघ, काठमाडौं । आफ्नो घर नभएर तथा काम विशेषले अर्को ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएमा अर्काको घरमा भाडामा बस्ने चलन प्रचलित छ । नेपालमा अहिले पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका मानिसहरु बढि रुपमा भाडामा बस्ने गर्ने गरेका छन् । भाडामा बस्नुपर्ने कसैको बाध्यता हो भने कसैको रहरपनि हुनसक्छ । अर्को कुरा पछिल्लो समय घर भाडामा बस्नेको दर निकै बढिरहेको विभिन्न तथ्यांकहरुले समेत देखाएको छ । विशेषगरी सहरकेन्द्रित तथा सदरमुकाम केन्द्रित भाडामा बस्नेको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेका पाईन्छन् । राजधानीमा अधिकांश मानिसहरु घर भाडामै बस्ने गरेका छन् । काठमाडौंका मुलवासी…
विचार / विश्लेषण, समाचारLeaveacomment	देउवाले डिआईजीलाई किन भने ‘तपाई नै आईजीपी बन्ने निर्णय भईसक्यो’
February 7, 2017February 8, 2017 tvannapurna03	टिभी अन्नपूर्ण २५ माघ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको महानिरिक्षकको बिषय गत बिहिबारको मन्त्रीपरिषद बैठकमा प्रवेश पाएपनि टुंगो लाग्न सकेन । मन्त्रीपरिषद बैठक पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाबिच नेपाल प्रहरीको आईजीपी नेपाली कांग्रेस र शसस्त्रको आईजीपीमा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा छनौट गर्ने सहमति भईसकेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीसँग भएको सहमति अनुसार गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले प्रस्ताव लैजान नमानेपछि मन्त्रीपरिषदमा प्रवेश पाएको आईजीको बिषय बिहिबार टुंगो लाग्न नसकेको हो । सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रको भागमा परेको शसस्त्र प्रहरीको आईजीमा माओवादी केन्द्रले सिंह बहादुर श्रेष्ठको…
विचार / विश्लेषण, समाचारLeaveacomment	के तपाईको मोबाईल हरायो ? यसो गर्नुहोस् !
January 31, 2017January 31, 2017 tvannapurna03	टिभी अन्नपूर्ण १८ माघ, काठमाडौं । काठमाण्डौको सुन्धारा होेटलमा बसेका एक जोडीले एकै रात ९ हजार खर्च गरे । डिलक्स रुममा बसेर मदिरासहित बिभिन्न परिकारको स्वाद लिएको त्यो जोडी हेर्दा निक्कै खान्दानीजस्तो देखिन्थ्यो । तर बिहानै त्यो जोडी एटिएमबाट पैसा झिक्न भन्दै बाहिर जान खोज्यो । मोबाईल धरौटी राखेर एटिएम जाने भन्दै निस्केको जोडी ६ महिनासम्म फर्केको छैन् । ३० हजार पर्ने मोबाईल ९ हजारको बिलमा २० हजार बढि पर्ने फोन धरौटी छोडेकाले होटलवालाले पनि उसलाई फेरी बोलाउन चाहेन । ६ महिनासम्म बाकसमै थन्किएको मोबाईल लिन धरौंटी राख्ने मान्छे नआएपछि,…
विचार / विश्लेषण, समाचारLeaveacomment	यसकारण हुनुपर्छ सिके राउतलाई कारवाही !
January 19, 2017January 19, 2017 tvannapurna03	टिभी अन्नपूर्ण ६ माघ, काठमाडौं । स्वतन्त्र मधेसको माग गर्दै आईरहेको डा. सिके राउत फेरी चर्चामा आएका छन् । मधेशलाई नेपालबाट अलग स्वतन्त्र मधेश बनाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका छन् । लामो समयदेखि जातिय मुद्दा तथा वर्गिय मुद्दा लिएर अगाडी आईरहेको सिके राउत एकाएक मधेशलाई अलग देश बनाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण चर्चित बने । सप्तरीको महदेवा गाउँमा जन्मेका राउत अमेरिकामा वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत रहँदा रहँदै सन् २०११ को अन्त्यतिर राजीनामा दिई नेपाल फर्किएका थिए । बिदेशकै डिजाईनमा नेपाल टुक्राउने अभियानमा लागेको आरोप लागेका राउत नेपाल फर्किए र स्वतन्त्र मधेश आन्दोलनको…
विचार / विश्लेषण, समाचारLeaveacomment	नेपाल मै ३३ किलोको भुरा माछा !
January 18, 2017 tvannapurna03	राजेशचन्द्र राजभण्डारी । नेपालमा रातारात बिकास भैसकेको रहेछ जनतालाई अत्तोपत्तो सम्म थिएन अस्ति भर्खरै भन्सारबाट ३३ किलो सुन समातिए पछि यो कुरा बाहिर आएको हो । अहिले त प्रहरी प्रशासनलाई भ्याइनभ्याई छ । दिनहुँ जस्तो सुन तस्करी गर्ने डलरको तस्करी गर्ने दलाल सहित किलो का किलो सुन समातिने क्रम दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढेर गएको छ । साच्चै अहिले प्रहरी प्रशासनले गरेको काम कारवाहीलाई हेर्ने हो भने हामी सबै नेपाली जनताले धन्यवाद दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा सानातिना चानचुने तस्कर हैन भन्सारबाट सिँगो हात्ती छिराउने ठुलो तस्कर कै बोलाबाला छ…
विचार / विश्लेषण, समाचारLeaveacomment	आफ्नै ड्राईभरलाई गाडीभित्रै आगो लगाएर मारेको आरोपमा प्रेमि प्रेमिका पक्राउ ।
January 17, 2017January 17, 2017 TV-Annapurna	टिभी अन्नपूर्ण काठमाडौँ, ४ माघ । दुई महिनाअघि सुमो गाडीमा आगो लगाएर गाडीचालकलाई मारेको आरोपमा झापामा प्रेमिप्रेमिका पक्राउ परेका छन । अरु कसैको योजनामा सुमोचालकलाई तेह्रथुम पौठाक ४ का मन कुमार लिम्बु र रसुवा जिल्ला सरनथली ४ की बिन्दु तमाङले हत्या गरेको आरोपमा उनिहरु पक्राउ परेको प्रहरीले जानाकारी दिएको छ । गएको मंसिर ८ गते मझुवा गाउँ विकास समितिको निगालपानीमा सुमो चालक झापा लखनपुर पाडाजुगीका २७ बर्षिया विशाल खडकाको शव जलेको सुमोभित्र भेटिएको थियो । प्रहरीका अनुसार उनिहरुले मंसिर ७ गते सुमो रिजर्भ गरी काठमाडौंबाट रसुवा लगेका थिए । रसुवाबाट…
राजनीति, विचार / विश्लेषण, समाचारLeaveacomment	मेडिकल शिक्षामा लुट धन्दा,यसरी ठगिंदैछन् विद्यार्थीहरु (कागजात सहित हेर्नुहोस्)
January 16, 2017January 20, 2017 tvannapurna03	शुकदेव चापागाईं / टिभी अन्नपूर्ण, ३ माघ काठमाडौं । नेपालको चिकित्सा शिक्षा (मेडिकल शिक्षा) व्यापक सुधार गर्नुपर्ने र विद्यार्थीहरुलाई कम लागतमा पढाउनुपर्ने माग राख्दै १० औं पटक सम्म अनशन बसेका डा. गोविन्द के.सीले बारम्बार सरकारसँग सम्झौता गर्दै अनशन तोड्ने गरेका छन् । तर के.सी जतिसुकै अनशन बसेपनि न उनको माग सम्बोधन गर्ने तर्फ सरकार लाग्छ न मेडिकल कलेज चलाउने व्यवसायीहरु के.सी र सरकारबीच भएको सम्झौता पालना गर्ने तर्फ लाग्दछन् । दशौं पटक सम्म अनसन बस्दै र सम्झौता गर्दै अनसन तोडिएपनि मेडिकल चलाउने व्यवसायीहरुले एक रत्तिपनि सरकार र गोविन्द के.सीबीच भएको…
अर्थ / वाणिज्य, विचार / विश्लेषण, समाचारLeaveacomment	राष्ट्रपति पुत्रिको ९ बर्षे लभ ७ पटक ब्रेकअप, आज बिहेमा परिणत हुदैं
January 16, 2017January 16, 2017 tvannapurna03	टिभी अन्नपूर्ण ३ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीकी कान्छी सुुपुत्री निशाकुसुम भण्डारीको ९ बर्षे प्रेमसम्बन्ध आजदेखी बिहेमा परिणत हुदैंछ । भण्डारी गएको ९ बर्षदेखी पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका नाती अभिषेक यादवसँगको प्रेमसम्बन्धमा थिईन् । बुढानीलकण्ठ स्कूल पढ्दादेखिकै साथी रहेका निशा र अभिशेषबिच करिब ९ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको निशाकुसुमका साथी ज्योती सिम्खडाले बताईन् । सँगै पढ्दा निशाकुसुमको प्रस्तावमा प्रेमसम्बन्धमा गाँसिएका भण्डारी र यादवको सम्बन्ध धेरैपटक जोडिने र छुट्टिने गरेको सिम्खडाले बताईन् । पछिल्लोपटक ४ बर्षअघि यादवले सम्बन्ध ब्रेक गरेपछि निशाकुसुम र अभिषेकबिच बोलचालसमेत बन्द रहेको थियो । निशाकुसुम भण्डारी यादवसँग…
विचार / विश्लेषण, समाचारLeaveacomment	नेपालमा महाभूकम्पको खतरा बढ्यो, यस्तो छ बैज्ञानिकको दाबी
January 15, 2017 TV-Annapurna	टिभी अन्नपूर्ण काठमाडौं, २ माघ । विज्ञान भन्छ, भुकम्पकीय जोखिमको पूर्वानुमान सम्भव छैन । बरु भूकम्पपछिको झट्का कतिबेला कस्तो ठाउँमा आउन सक्छ भन्ने बारे सामान्य अनुमान गर्ने केही आधार हुन्छन् । लामो समयदेखि भूकम्प र भू संरचनाका विषयमा अध्ययन गरिरहेका भारतका प्रोफेसर वैज्ञानिक चन्दन घोषले दक्षिण एसियामा भूकम्पीय पूर्वानुमान सम्भव नै नहुने ठोकुवा गरेका छन् । तर भूकम्पपछिको झड्काको अनुमान गर्न नसकिएपनि केही सेकेन्ड पहिलेमात्रै वैज्ञानिक रुपमा अध्ययन गरेर भूकम्प कहाँ जानेवाला छ भनेर भन्न सकिन्छ । जुन निकै कम समय हो । नेपालको सन्दर्भमा त यसको जानकारी दिने वा…
विचार / विश्लेषण, समाचारLeaveacomment	गर्भपतन संस्कृति कि विकृति ?
January 15, 2017January 15, 2017 tvannapurna03	राजेशचन्द्र राजभण्डारी । गर्भपतनलाई सरकारले कानुनी मान्यता दिएपछि अहिले यो नेपाली पुरानो उखान यतिबेला याद आयो, ‘मलाई नपाउने ले केरा खायो बोक्रा सँगै खायो’ झै भएको छ । खै के हुन लागेको हो देशमा अचम्म भएको छ के हो गर्भपतन सेवा भनेको अहिले गाउँ देखि शहर सम्म सबै ठाउँमा यो सुबिधा भएपछि बैध अबैध गर्भवती भए यसलाई सजिलोसँग फाल्ने हतियार भएको छ । कतिपय अबस्थामा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले नेपालका महिला अधिकारबादी लगायत देशी बिदेशी गैरसरकारी सँघ सँस्थाको दबाब र प्रभावमा परेर गर्भपतन गराउन पाउने कानुनी मान्यता…
विचार / विश्लेषण, समाचारLeaveacomment	Posts navigation